वास्तमा को हुन त छिरिङ डम्दुल लामा (कार्चेन) ? गाविस उपाध्यक्षमा देखि माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धमा पश्चिम सैन्या डिभिजन ब्युरोका सदस्य सम्म « Philco Mission
वास्तमा को हुन त छिरिङ डम्दुल लामा (कार्चेन) ? गाविस उपाध्यक्षमा देखि माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धमा पश्चिम सैन्या डिभिजन ब्युरोका सदस्य सम्म
माघ २२ ,२०७८
हुम्ला । छिरिङ डम्दुल लामा (कार्चेन) तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा हुम्लाबाट सबै भन्दा पहिलो पूर्णकालिन हुने व्यक्ती हुन ।
साविकको बरगाउँ गाविस ५र्तोपा गाउँमा जन्मीउनभएका लामा सानै बाल्यााकालिन उमेरमा विद्रोही स्वाभाका थिए । बरगाउँ गाविसको उपाध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएका लामा यस क्षेत्रका तत्कालिन सामान्तहरुले चलाएको शासनको प्रभावमा तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सक्रिय भएर लागेका थिए ।
वास्तविक नाम छिरिङ डम्दुल लामा हो तर उनी पार्टीले राखेको कार्चेन नामले चर्चित छन । उनि समाजमा सतवीज छर्दै सर्वहारा वर्गको हितमा लागेका छन् । उनी खरो, दह्रो र विद्रोही स्वभाव भएको नेताको रुपमा हुम्लामा चिनिन्छन । आफूलाई मन नपरेको कुरामा उनी न समर्थन जनाउँछन् न त चुप लागेर बस्न नै सक्छन् यो उनको अर्को बिशेषता रहेको छ । उनी हरेक कुरा निर्भिकताका साथ राख्ने र नराम्रो कुराको विरोध गरिहाल्ने उनको बानी भएकोले उनी राजनीतिक वृत्तमा फरक शैलीका रुपमा हुम्लाबाट अगाडी आएका छन ।
“आफु कम्यूनिष्ट विचारधारा बोकेर कम्यूनिष्ट राजनीतिमा २०४६ सालमा मोटो मसालबाट राजनैतिक यात्रा सुरू गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘म सानैदेखि विद्रोही स्वभावको भएकोले सर्वहाराको हितका लागि विद्रोह गर्न कम्यूनिष्ट बनेको बताए । म लामा समुदायमा कम्यूनिष्ट विचारधारा बोक्ने पहिलो सिंगो हुम्ला जिल्लाबाट माओवादी पार्टीको सदस्य बनेको बताए ।’ विक्रम सम्वत् २०२४ /५/३ सालमा र्तोपा गाउँपालिाकामा जन्मिएका कार्चेन सानै उमेरमा राजनीतिमा होमिएको बताए ।” ०४७/०४८ मा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल को सक्रिय सदस्य
बनेको र ०५४ मा नेकपा माओवादी को एसिएम र जनर्मोचा बा बरगाउ गाबिसको अध्यक्षमा नर्बाचित भएको तर पछि उपाध्यक्ष छोडेर बताए । ०५४ मै कालिकोटमा चुनाव बहिस्कारमा भाग लिएको बताए ।
अर्धभुमिगत कम्यूनिष्ट पार्टीको सदस्य राजनीतिक जीवनमा कार्चेनले धेरै नेता, कार्यकर्ता उत्पादन गरे । पातालो मशाल मोटो मशाल हुँदै संयुक्त जनर्मोचा पार्टीमा २०४६सक्रिय रुपमा लागेको बताए । मलाई कम्यूनिष्ट बनाउने पहिलो ब्यक्ति मेरा राजनीतिका गुरु बाबुराम भटराई,नेत्र बिक्रम चन्द (बिप्ल) ,हिमाल शर्मा,सन्तोष बुढा मगर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँकै कारण म माआोवादीमा राजनीतिमा सक्रिय भएँ ।’ उहाँले देखाएको बाटो हिड्ने क्रममा उहाँले २०५६ साल एरीया सेक्रटरी हुँदै जिल्ला कमिटीमा सदस्य,जिल्ला कमिटिमा गठनका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । २०५६ साल इन्र्चाज हर्ष बहादुरी शाही (प्रभात) हुनुहुन्थ्यो । ०५६ साल कार्तिक १३ गतेको हुम्लाको राहदेव गाउँमा प्रहरीबाट दमन दिए पछि लामा भुमिगत रुपमै जिवन बिताएका हुन् । हुम्लाको सिमकोटमा रहेको मानरसवर माविका शिक्षक मुकुन्द घिमिरेका चेला भएको बताए । उनी सक्रियतारुपामा जिल्ला कमिटिमा रहेर पनि पार्टीलाई सहयोग गर्ने वचन गरे । तत्कालिन माओवादीले चलाएको अभियानमा ०५४ मै कालिकोटमा चुनाव बहिस्कारमा भाग लिएको बताए । नेकपा (माओवादी) पार्टीको २०५५मा हिमालि जनसाँस्कृतिक परिवारको अध्यक्ष समेत रहेर संचालन गरेको पाइन्छ ।
कर्णाली उपब्युरो,सदस्य कर्णाली मुक्तिमोर्चाका सदस्य देखि ०५९/०६० तिर हुम्ला जिल्लाका जनसरकार प्रमुख तथा भेरिकर्णाली स्वायत्त सरकारको सदस्य भएका लामा त्यागी र इमान्दार मध्येकै एक राजनीतिकज्ञ मानिन्छन । जिल्लाको जनसरकार प्रमुख हुदै भेरी कर्णाली सदस्य भेरीकर्णाली ब्युरोका सचिवालय समेत सदस्यका रुपमा कामसमेत गरेका हुन ।
दुर्गम जिल्ला लामा समुदायका छोरा कार्चेन ०५८ सालतिर पश्चिम सैन्या डिभिजन ब्यरोका सदस्य भएर काम गरे । शैन्य तालिम दिन पोख्त पार्टी सदस्यता लिएदेखि उनले राजनीतिमा सक्रियरुपमा लागेको बाताए । ०५८ सालतिर पश्चिम सैन्या डिभिजन ब्यरो सदस्य समेत समालेका हुन । हिमाली भोटे राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत बने । जनयुद्धको बेला पश्चिम डिभिजनले विश्वास गरेर उत्तरी नाकाबाट हतियार व्यवस्थापनको जिम्मा कार्चेनलाइ दिएको थियो ।०५९ देखि ०६१ भेक क्षेत्रिय ब्यूरो सचिवालय सदस्य तथा ०६५ हिमाली भोटेलामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल को केन्द्रिय अध्यक्ष समेत बनेको देखिन्छ ।
लामा समुदायको नेतृत्व कर्णालीका मुगु,डोल्पा,हुम्ला मात्र नभएर दार्चुला देखि सोलु सल्लेरी सम्मको हिमाली जिल्लाका लामा समुदायका हितमा आवज उठाए । ०६९ मा नेकपा माओवादी केन्द्र को केन्द्रिय सदस्य र ०७०/०७१ साल पोलिब्युरो सदस्य जिम्मेवारी अंगालेका उनी एकिकृत माओवादी पार्टीका ३/३ पटक जिल्ला इन्र्चाजको जिम्मा अंगालेको अनुभवी नेता हुन । त्यस पछि २०७४ बैसाख १ गते स्थानिय चुनाव बाट नेकपा माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्यमा माओवादी केन्द्र पार्टीले लगेकोको थियो ।
माओवादी केन्द्रले साँसद टिकट दिएका लामा जिल्लामा छक्कबहादुर लामा र छिमि लामा (आशाकार)बिच विवाद हुदाँ सहजै आफु पाएको टिकट साँसद छक्कबहादुर लामालाई हस्तान्तर गरेका थिए । कार्चेन लामा ३२ वर्षदेखि राजनीति जीवन बिताएर पाटी भित्र हुने गरेका असुन्तुट पक्षलाई आफुले जिम्मावारी त्याग गर्न निष्ठावान नेताका रुपामा देखिएका छन । लामाले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कम्यूनिष्ट राजनीतिमा विताएका छन ।छिरिङ् डम्दुल लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा भौतिक पुर्वाधार तथा योजना मन्त्रिको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।